बुधबार, साउन १३, २०७८ ०४:०२:४२ युनिकोड
आईतबार, असोज ४, २०७७ Dhading Sanchar
धादिङ,०४ असोज ।
कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रण,बाढि पहिरोको कारण समस्यामा परेका नागरिकहरुको लागि गर्नुपर्ने काम, समग्र विकास निमार्णको(खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, सुसासन लगायको विषयमा कार्यक्रम जनतासँग मेयर कार्यक्रममा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भिम प्रसाद ढुङगानासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नीलकण्ठ नगरपालिकाले कोरोना भाईरस रोकथाम तथा न्युनिकरण गर्नको लागि चालेका कदमहरुको प्रभावकारीता कस्तो छ ?
प्रभावकारीता राम्रो भन्नु पर्यो । संयोग बस एक जनाको मृत्यु भयो । हामीले पीसीआरको दायरा बढाएका छौँ र आईशोलेसन र क्वारेन्टाइन पहिले नै हामीसगँ छ । जिल्लाको सदरमुकाम भएको कारणले नीलकण्ठ नगरपालिकाको मात्र नभएर अन्यत्र पालिकाबाट पनि आएको अवस्था छ । हामीले आफनो क्षमताले भ्याए सम्म काम गर्दै गएका छौँ ।
नगरबासीको ज्यान धन रक्षा गर्नको लागि नगरपालिकाले प्रतिबद्धता अनुसार काम गरि रहेको छ ?
हामीले कर्मचारीहरु, जनप्रतिनिधिहरु लगायतको कोभिड १९ को इन्सुरेन्स गरेका छौँ । नगरबासीहरुले सिफारीस गर्ने क्रममा हामीले वडा कार्यलयबाट सिफारीस लिन पैसा छुट गरेका छौँ ।
कोरोनाबाट मुत्यु भएका एक जनालाई एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेका छौँ । औषधि उपचारको निमित्त पनि हामी खर्च दिन्छौँ । जुन मैले घोषणा गरेको थिएँ, त्यसलाइ नगर कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेको थियो । नीलकण्ठ नगरपालिकाले कोभिड १९ लगााएतका सम्पूर्ण खर्चहरु बेहोर्ने भनेको थियो त्यो अनुसार हामी बेहोर्छौँ र बेहोरीरहेका छौँ ।
बजार क्षेत्र पीच दसै अगाडिबाट सुरु गर्ने भन्नु भएको थियो , त्यो अहिले के हुदैछ ?
अहिले पशुपती मार्गबाट काम सुरु भइरहेको छ । दसैँ अगाडि सकिन्छ भनेर ठेकेदारले मसगँ कुरा गरेको छ यदि सकेन भने पनि तिहार सम्ममा ७ किलोमिटर पीच पुरा भइसक्छ ।
नगरपालिका भित्र नियमित पठनपाठन गराउँन सक्ने अवस्था कस्तो छ ? नगरपालिकाले के सोचिरहेको छ ?
म अत्यन्त चिन्तित छु । आज मात्र संथागत विद्यालयक प्रधानाध्यापकहरुसगँ बसेर छलफल गरेर आए । भोलि इकाइद्धारा सबै पालिकाहरुको मिटिङ छ । भोलको मिटिङ पछि हामी नगर शिक्षा समितिको मिटिङ बस्छौँ । अनलाइन कक्षले पनि विद्यार्थीहरुलाई पढाइरहेको छ र पढिरहेको छ भन्नु मात्र हो ।
भौतिक विकास आगामि वर्ष गरेपनि हुन्छ । शिक्षाको त्यस्तो हुदैन, हामी तत्काल एउटा निर्णय गरेर उपस्थितिमा गर्ने या अनलाइनमा गर्ने, कस्तो रुपमा लिएर जाने ? संघीय सरकारले मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट संस्थागत विद्यालयहरुलाई पनि स्थानिय सरकारको सहमतीमा या अनुमतीमा भनेको कारणले हामी केही दिन भित्र निर्णय गर्छौँ । जति सकिन्छ अहिलेको परिस्थितिलाइ मध्यनजर राखेर हुने, सक्ने सम्म हामी गर्छौँ ।
धदिङबेशीमा खानेपानिको नयाँ पाइप लाईन कहिले देखि सुरु हुन्छ होला ?
गत साल यसको डिपीआर गर्ने भनेर तयार भइसकेको थियो । कोभिड १९ को कारणले डिपीआर हुन सकेन । नगरपालिकाले पनि पैसाहरु छुटाएर राखेको छ । गत साल पनि हामीले म्यानेज गरेनौँ किनकी त्यो डिपीआरको रिपोर्ट आइसकेपछि मात्र वितरण लाइनहरु अगाडि बढाउने भनेका थियौँ ।
हामीसगँ मुलको समस्या छैन, आरबीटीको समस्या छैन । धादिङबेशीको खानेपानिको निमित्त भनेको डिस्टिबुसन लाइनको समस्या हो । हामी कोभिड १९ ले गर्दा एक वर्ष ढिला भयौँ । अब केही समयपछि वितरण लाइनहरु अगाडि बढाउछौँ र यहाँको खानेपानिको समस्या समाधान गर्छौँ ।
नागरीकहरु कामको सिलसिलामा धादिङबशी झर्दा दिसा पिसाब लाग्दा होटलको १०० रुपैयाँको खाजा खानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले होला ? शौचालयहरु बनिसकेर हामीले थाहा नपाएको पो होकि, बन्ने प्रक्रियामा छ कि ?
दुई वटा सार्वजनिक शौचालय पहिले नै छ । एउटा पशुपति जाने चौतारा भन्दा एता पट्टि छ, अर्को पुछार बजारको ट्राफिकबाट दाइने पट्टि सार्वजनिक शौचालय बनेको छ ।
अहिले ग्रामिण खानेपानि तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको म बोर्ड अफ डाइरेक्टर भएको कारणले अहिले नीलकण्ठ नगरपालिकमा ३ वटा र ज्वालामुखी गाउँपालिकाको कार्यालय नजिक एउटा, ४ वटा करिब ३० लाख भन्दा बढीको सार्वजनिक शौचालयहरुको टेन्डर भइसकेको अवस्था छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिकामा एउटा ससाहमा, एउटा धादिङबेशीमा र एउटा जुरेथुममा प्रक्रियामा छ र तत्काल एउटा ठूलो अथवा राम्रो क्वालिटिको शौचालय बन्छ । सार्वजनिक शौचालय यो दुइ वटा छ र एउटा थपिदै छ । तपाईले नेटको कुरा गर्नुभयो यो म सम्बन्धित कार्यालयमा गएर कुराकानी गर्छु ।
भोजराज घिमिरे (नीलकण्ठ–१४)
असार श्रावण तिर कच्ची सडकमा डोजर चलाएर जनताको घर जोखिममा पारि बजेट सक्नु भन्दा हिउँदमा बजेटले पुगेसम्म पक्कि सडक बनाई दिगो विकास तर्फ ध्यान दिने कि?
हामीले वडा वडामा पैसा दिएका थियौँ,म आफै गएको छु सायद असारको बेलामा त्यहाँ काम भएको छैन । त्यो भन्दा पहिले काम भएको हो तथापी त्यो स्तरोन्नति मात्र तपाईको १४ मा काम भएको कारणले असारमा हिँड्दा बाटोमा हिलो भयो होला, गाडिहरु चिप्लिए होलान् त्यो स्वभाविक कुरा हो यता कता कहाँ भएको छ भने म सुधार्न लाउँछु ।
आज मात्र निर्णय गरिसकेको छ हरेक वडालाई यो दसैँको बाटो मर्मत सुधारको निमित्त प्राबिधिकहरु खटाइसकेको छ । हरेक वडामा १०/१० लाख रुपैयाँ मेसिन लगाएर सबै क्लिर गर्ने भनेर हामीले पैसा छुटाएर पठाइसकेका छौँ । अहिले एक करोड ४० लाख मात्र दसैँ बाटो मर्मत सुधारको लागि भनेर दिइसकेको छ ।
प्रदिप लम्साल (नीलकण्ठ –९ )
हिउँदमा खनिन्छ बर्खामा बाटो जस्ताको त्यस्तै यसलाइ कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ?
हाम्रो थोरै श्रोत र साधनले धेरै कामहरु गर्नु पर्ने भएकोले र बर्खा यसपालि ठूलो पनि आयो त्यो हिसाबले पनि अहिले केही बाटाहरु चिरा परेका होलान् तर हामी दसैँ अगाडि सबै मर्मत सुधार गरि सक्छौँ ।
अब रेड बुक पनि आइसकेको छ, सामाजिक दुरी कायम गर्दै विकासको योजनाहरु सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
सुरु भैइसकेको छ, अब कुनै पनि विकास निमार्णका कामहरु हामी बाँकी राख्दैनौँ । प्राबिधिकहरुलाई खटाइसकेका छौँ । सामाजिक दुरी कायम गरौँ, सबै आ–आफनै ठाउँमा होसियार हौँ तर भौतिक विकास निमार्णको कामहरु यसरी रोकेर सम्भव हुँदैन । अस्ति १३ जना मजदुरहरु बाराबाट आए क्वारेन्टाइनमा राखियो ।
त्यसपछि पीसिआर नगरपालिकाले गरेर बजारको पीचको काम सुरु भएको छ । हिजो १६ जना मजदुरहरु धुवाँकोट जाने बाटो पीचको लागि आए । हिजो बिहान हामीले त्यसको पनि पीसिआर गरिसकेका छौ,त्यो रिपोर्ट आउने बित्तिकै काममा लगाउँछौँ । टाढाबाट आएका मजदुरहरको पीसिआर गर्छौँ । यहीँ काम गर्नेको त पीसिआर गर्न परेन नि , गर्दा त राम्रो हो तर लक्षण नदेखिकन मन्त्रालयले ,ध्ज्इ ले पनि पर्दैन भनेको कारणले हामी काम अगाडि बढाउँछौँ, कुनै पनि कामहरु रोक्दैनौँ ।
मलेखु सल्यान्टार सडकले ३१ मिटर दायाँ बायाँ कायम गरेपछि अहिले सो सडक आसपासमा बस्ने स्थानिय ठूलो मर्कामा परेका छन्, एकातिर बैँकले ऋण रोक्का गरेको छ भने अर्को तिर नगरपालिकाले नक्सा पास गरेको घरको सम्पन्नको प्रमाण पत्र पनि दिएको छैन तर कर भने लिइरहेको छ यति ठूलो नगरपालिकाले २÷३ सय घरको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ?
यो नीलकण्ठ नगरपालिकाले निर्णय गरेको कुरा होइन । यो भरतपुरबाट २०७६ साल असार २७ गते ४ सय ४४ चलानी नं बाट आएको पत्र हो । अहिलेसम्म राजपत्रमा निकालेको छैन र जिल्ला समन्वय समितिमा संघीय सांसद, प्रदेश सासंदहरु प्नि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो । मैले यस्तो पत्र आएको छ ,आज दायाँ र बायाँ गर्दा जनतालाई ठूलो आघात पुग्न सक्छ ,तत्कालीन रुपमा जति जग्गा खाएपनि ३१ मिटर छोड्दा त्यसको राहत नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ भन्ने निर्णय आउन पर्यो ।
यदि निर्णय आएन भने जनतालाई आघात हुन्छ तपाईहरुले गएर तत्काल एउटा निर्णय गराउनुस् भनेर मैले संघीय सांसद, प्रदेश सासंदको अगाडि समन्वय समितिको हलमा बाल्ने क्रममा मैले यो कुरा राखेको हो । त्यसैले यो नीलकण्ठ नगरपालिकाको काबु भन्दा बाहिरको कुरा हो । यो संघले गर्नु पर्ने कुराहरु हुन् ।
व्यवस्थित पार्किङको लागि नीलकण्ठ नगरपालिकाको योजना के छ ?
अहिले हामीले करिब तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएका छौँ । केही कामहरु पनि भएको छ । यो बर्खाको कारणले अधुरो थियो भने बीच बजारमा एउटा बसहरु भित्र राख्ने काउन्टर पनि भित्र राख्ने र मोटरसाइकल ,साना गाडि पनि राख्नको निमित्त हामीले जग्गा महिनावारी भाडामा लिएर त्यहाँ आधा भन्दा बढी बनाइसकेका छौँ । एक महिना भित्रमा पार्किङ स्थलहरु सम्पन्न गर्छौँ । अब पीच हुने बित्तिकै तलतिरको लागि अन्यत्र लानुपर्ला तर माथि तिरको त्यहाँ पार्किङ गरेर होलो खुकुलो बनाएर सडक क्लियर गर्छौँ ।
शम्भु बसेल (नीलकण्ठ –६ सुनौला बजार)
सुनौला बजार वडा नं ६ बाट गुप्तेश्वरी मन्दिर सडक निमार्ण समिति थियो, त्यसमा हामीले काम सम्पन्न गर्यौँ । हामीले भुक्तानी पाउन पर्ने असार मसान्तसम्म हो तर आहिलेसम्म पाएको अवस्था छैन। सबै अल्झिएका फाइलहरु लेखासम्म पुगेको थियो तर अकस्मात प्रशासन प्रमुख फेरिएर नीलकण्ठमा को आउने, को जाने अथवा कहिले देखि आउने, कहिले देखि संचालन हुने त्यो नै थाहा भएन ?
बाटोको भुक्तानी गुप्तेश्वरी मन्दिर जाने उता गल्छिबाट आउनलाइ सानो रकम हालिएको थियो । अब गल्छि गाउँपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिकाको बीचमा एउटा बाटोको कनेक्सन भएको छ । गुप्तेश्वरी मन्दिर जाने आउनेलाई गल्छिबाट आउँदा पनि अथवा नीलकण्ठबाट जादाँ पनि सहज भएको छ । तपाईहरुले राम्रो काम गर्नु भएको छ म धन्यवाद दिन्छु । त्यसको भुक्तानीको विषयमा करिब आज धेरै उपभोक्ता समिति या ठेकेदारहरुले पैसा पाएको अवस्था छैन । असार मसान्त लाग्यो त्यसपछि श्रावण लाग्ने बित्तिकै चेकहरु सब बन्द भयो ।
हामीले कागजपत्रहरु सबै तयार गरेर राखिसकेका छौँ । नगरसभा सकिने बित्तिकै त्यो योजनाहरु इन्ट्रि गरेपछि हाम्रो शिक्षाको उपसचिबलाई कार्यका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बनाएको थियो । उहाँ एक महिना भन्दा बढी समय देखि नगरपालिकामा बिना बिदा, बिना अनुमती काठमाडाँै गएर बस्दिनुभएको छ । मन्त्रालयले पनि एउटा निर्णय गर्यो,निमित्त कार्यलय प्रमुख दिएकाहरुलाई सबैलाइ हटाउने भनेर सामान्य प्रशासनले पनि एउटा निर्णय गर्यो ।
अहिले नीलकण्ठ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रुपमा तुलसीराम पौडेल भन्ने पत्र आइसकेको छ । उहाँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौँ पनि भएको कारणले र उहाँको नजिक को केहीलाई पोजिटिभ देखिएकोले क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्यो । उहाँले मलाइ जानकारी गराए अनुसार १ गते देखि ३ गते सम्म नगरपालिका आएर हाजिर भैसक्छु भनेर भन्नुभएको छ । उहाँ आएपछि सबै भुक्तानी दिने कामहरु अगाडि बढ्छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाको निमार्णाधिन चक्रपथ यो वर्ष थप कालो पत्रे पीच गर्ने बजेट छुटाएको छ कि छैन ?
हामीले बहु वर्षीय योजनाको रुपमा पहिलो वर्ष राखेका हौँ । त्यो आधा भन्दा बढी पीच भईसक्थ्यो,बहु वर्षीय योजनाबाट काटेर सदन सहरीबाट रिङरोडको नाम हटाइयो । हामीसगँ करिब एक डेढ करोड छ ,हाम्रो पीचको कार्यक्रम छैन । ग्राभेल र स्तरोन्नति गरेर कमसेकम धुलोमा भएपनि आगामि जेष्ठ सम्ममा बस चलाउन सकिन्छ कि भनेर पैसा छुटाएका छौँ ।
अहिले धादिङ बेल्डाँडा हुदै सेउली भ¥याङभुरुङ सम्मको पीचको काम भइरहेको छ,अहिले सेउली सम्म ग्राभेल गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ काम कतिको विश्वसनियता भएको छ कि छैन भनेर जाचँ बुज गर्न नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ?
अहिले सेउली सम्म धादिङबेशीबाट पीच ८ किलोमिटर हुन्छ भने त्यहाँबाट उता २१ किलोमिटर ग्राभेलको कुरा हो । मैले प्राबिधिकहरु खटाइसकेको छु । अनुगमन अलि बाक्लो गराउने मोडमा छु र भनिसकेको छु ।
ईश्वर श्रेष्ठ( नीलकण्ठ–७)
नीलकण्ठ ७ सुकौरा बेशीमा यस वर्ष के के मा बजेट परेको होला ? बर्खाले बाटो नै छैन, धादिङबेशी मात्र पीच हुने होकी तपाईको कार्यकालमा हाम्रो तिर पनि पालो आउँछ ?
अहिले मात्र दुईवटा कार्यक्रमहरु तपाईलाइ हाल्देको थिए । एउटा बाटो अनि अर्को खानेपानिको लागि त्यो बाटो सम्पन्न भयो भएन मैले निरिक्षण गरेको छैन र खानेपानिको काम सम्पन्न भयो कि भएन तपाईहरुले मलाई जानकारी गराउनु भएको छैन । मैले यो जेष्ठ तिर आएर यही नीलकण्ठ एफ.एममा एक जना मित्र राजन भन्नेले मलाइ प्रश्न सोधेपछि त्यसको केही दिन पछि मैले खानेपानि र बाटोको लागि गरेको छु । अहिले पीच हुने योजना छैन । तपाईहरुले खन्नुभएको बाटो यसपालि कस्तो छ म हेर्न आउँछु । त्यसपछि अरु के के गर्न पर्छ त्यही बसेर सल्लाह गरौला ।
सन्देश कुवँर (नीलकण्ठ–११ हल युएइबाट)
नीलकण्ठ नगरपालिका कहिले सम्म तिर्खा मुक्त बनिसक्छ र कहिले सम्म १२ मास सवारी चल्न सक्ने सडक बनिसक्छ ?
१२ महिना सबै नगरपालिका भित्र चल्न सक्ने सडक त मलाई नि बनाउन इच्छा थियो तर त्यो सम्भव छैन । वडा कार्यालय सम्म पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य छ त्यो पुराएर देखाउछौँ । अब तिर्खा मुक्तको निमित्त खानेपानिको १० औँ करोड योजनाहरु हाम्रो त्यत्तिकै बसेको छ । अहिले १४÷१५ वटा योजाहरु अगाडि बढ्छ । हरेकको कर्तव्य हो,नगर प्रमुख र प्राबिधिकको मात्र होइन तपाईहरुले जसरी साथ दिइरहनु भएको छ अब पनि साथ दिनु होला भन्ने मैले आशा गरेका छु ।
यो आर्थिक वर्षमा कस्ता कस्ता योजनाहरु छन् ?
नयाँ योजनाहरु हामीले तर्जुमा गरेका छैनौँ,पुरानो योजनाहरुलाई पुरा गर्ने सोचमा छौँ । कोभिडको कारणले मेयर उद्यमशीलको कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन पाएका छैनौँ ।
त्यसलाइ पहिलो चरणको रकमहरु कार्यालय प्रमुख आउने बित्तिकै रकमहरु रिलिज गर्न थाल्छौँ । दोस्रो चरणमा पनि मेयर उद्यमशीललाई वडा वडाबाट उद्यमहिरुलाइ तालिम दिएर फेरी उद्यमशील बनाउनकोे निमित्त अगाडि बढाउँछौ । खानेपानिको काम हाम्रो अगाडि बढिरहेको त्यसलाई बढाउछौँ ।
१४ वटा वडामा हेल्थपोष्टहरु निर्माण भइसकेका छन् । यसपालि हाम्रो सबै वडा कार्यलय भवन सहित हुन्छ । हरेक वडामा प्राबिधिकहरु, हेल्थपोष्टमा कर्मचारीहरु,वडा कार्यलयमा सचिबहरु पठाएका छौँ । हामी व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढ्दै छौ र यो आर्थीक वर्षमा नीलकण्ठ नगरपालिकाको मुहार धेरै फेरिन्छ ।
केराबारीको बाटो कहिले सम्म फराकिलो र ग्राभेल होला ?
केराबारीको बाटोको लागि म दुइ तीन दिन भित्रमा मेसिन पठाइदिन्छु । त्यो भन्दा तल खाल्टे जाने बाटोको पीचको निमित्त पनि २ करोड छ । त्यो टेन्डर गर्न लाइसकेका छौँ । २ नं मा पनि ग्राभेल देखि लिएर ठूलो रकमहरु माथी तिर परेको छ । यसपालि धेरै पीचको काम र ग्राभेलको काम दखिने गरी हुन्छ ।
यो फुटपाथमा हिँड्दा पानी पर्दा छतको पानी बटुवाको ढाडमा पर्ने समस्या छ,यसलाई कसरी व्यवस्थापन सकिन्छ ?
यो पीच गरेपछि अगाडि पट्टि राखेको टिनहरु छ त्यो निकाल्दिने,सामानहरु त्यँहा राख्न नदिने,यता कता छतको पाईप बाट तल छ भने त्यो बन्द गरेर हामी यसलाई निर्मुल गर्छौ ।
करिडोर र वासीङ गरेर गाडिहरु धादिङबेशी प्रवेश गराउने यसको लागि तयारी के हुदै छ ?
गाडि सफा नगरी धादिङबेशी छिर्न नदिने त्यसको निमित्त स्टमेट भईसकेको छ अब केही दिन पछि कार्यन्वयनमा जान्छ । करिडोरको निमित्त नारायण कुमार श्रेष्ठको अध्क्ष्यतामा कमीटि गठन भएको छ ।
हजुर आफैलाई मैले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सके या सकेन के लाग्छ ?
अझै सकेको छैन,सुरुवात हो । अहिले सन्तुष्टि लिएर बसे भने धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
जनतासँग मेयर कार्यक्रम रेडियोबाट प्रत्यक्ष,त्यसैगरी फेसबुक पेजबाट र अनलाईन मार्फत सुनेर बस्नु भएकालार्ई अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
मलाई सल्लाह सुझाबको अपेक्षा र वडामा, टोलमा यो विकास सबैको विकास हो । एउटा मेयरको मात्र,जनप्रतिनिधिको मात्र होइन जुन हिसाबले साथ र सहयोग दिइरहनु भएको छ र बाँकी दिनमा पनि तपाईहरुको साथ र सहयोगको म पूर्ण रुपमा अपेक्षा गर्छु ।